I-Monrabá incokola ngokunxibelelana kweshishini kwikamva kwiMithombo yeendaba yokuDibanisa | Iindaba zeGajethi
Nge-6 kaJuni, iTorre Espacio, iziko loshishino elinelungelo eMadrid, labamba Ukuqhagamshela iMedia, Esinye seziganeko ezifanelekileyo kwihlabathi liphela malunga imidiya yedijithali apho Ikhole izakuthatha inxaxheba kunye noGoogle, Interxion kunye neeEpicLabs ukukhuthaza nokwazisa ngemingeni yonxibelelwano ngomnatha weendaba.
Siye sanethuba lokuthetha naye UJoan Monrrá, uMlawuli oLawulayo weColt eSpain, inkampani ehamba phambili kwizisombululo zenethiwekhi zeshishini, ngokukodwa kwi-fiber optics kunye neenkonzo ezenzelwe wena. Ngale dliwanondlebe, sinokufumana umbono wendlela ecwangcisiweyo yokunxibelelana kweshishini kwikamva.
Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, sibeka etafileni eyona micimbi ibalulekileyo, iArtificial Intelligence, uqhagamshelo lwe5G kunye nekamva ngokubanzi alinakubakho ... Xa sithetha nge5G amaxesha amaninzi sigxile kwi-IoT kunye nokusetyenziswa kwekhaya, Kodwa, yintoni ukuphunyezwa kweenethiwekhi ze5G ezinegalelo kwinqanaba leshishini kwaye oku kubachaphazela njani ngokuqinisekileyo abasebenzisi?
Iimveliso kunye neenkonzo ezibonelelwa nguColt linyathelo elinye phambi kokhuphiswano, ubungakanani befayibha efakiweyo nesiphetheyo kuyo kwinkampani iyasivumela ukuba sizibeke kwindawo entle kakhulu ukuhambisa imiqondiso ye-5G yezixhobo ezingenazingcingo zeenkampani zethu. ezinje ngeefowuni eziphathwayo, kwaye ke, izixhobo ezizenzekelayo zasekhaya (IoT). Uvavanyo lokuqala lukaColt lusekwe ekusebenziseni ii-eriyali ze5G kumaziko ethu kwaye ulwazi luhamba ngokusebenzisa uthungelwano lwefibre edibeneyo, ngaloo ndlela lubeka umxholo walo phambili, lubangele ukusebenza ngokukuko, ngokukhawuleza nangaphandle kokuzalisa.
1 Ngawaphi amaxabiso ongezelelweyo othungelwano anjenge-Colt's IQ Network azisa ngayo kubasebenzisi beshishini?
2 Kubonakala ngathi itekhnoloji ye5G kunye neArtificial Intelligence zinxibelelene ngokusondeleyo, zithini izicwangciso zeColt zexesha elizayo kwezi teknoloji?
Leliphi ixabiso elongeziweyo elenza uthungelwano olufana nenethiwekhi ye-IQ ye Ikhole kubasebenzisi beshishini?
Uthungelwano ngumdlali weqonga ofanelekileyo, ngakumbi kweli xesha lotshintsho lwedijithali, asinalo kuphela uthungelwano oluqhagamsheleneyo kodwa kunye namaziko ethu edatha, oku kuvumela ukufikelela okukhulu kwidatha egciniweyo, kwenza ukuba kubekho ukhuseleko olusebenzayo ngakumbi ... Umzekelo, oku kuvumela ukuba sinikezele abathengi ngenkonzo ye-IT kwimfuno, esenza ukuba sikwazi ukuguqula ngokuzimeleyo umda wokuhambahamba ngokweemfuno zabathengi kwangoko, sijongane nayo yonke into enokwenzeka kwaye ivumela umsebenzi ukuba uhambe.
Kubonakala ngathi itekhnoloji ye-5G kunye neArtificial Intelligence zinxibelelene ngokusondeleyo, zithini izicwangciso zexesha elizayo Ikhole ejongene nezi teknoloji?
I-5G iyakwenziwa ngale ndlela ichazwe apha ngasentla, ngokusebenzisa uthungelwano lwethu lwefayibha, kuba yahluke ngokupheleleyo kunaleyo inikelwa ngabasebenzi abaqhelekileyo. Nangona kunjalo, iArtificial Intelligence izakuthatha indima ekhokelayo kule minyaka izayo, eColt sele sisebenza ngaphakathi kunye nezisombululo zeArtificial Intelligence ezisivumela ukuba sihlalutye kwaye siqikelele ukusebenza kwenethiwekhi kunye nokusetyenziswa kwedatha. Omnye umzekelo kukuba thina kwi-Colt siyisebenzisa ngaphakathi kuthethathethwano kwezomthetho kwaye isebenza ngokukuko.
Kweli xesha lotshintsho lwedijithali apho abathengi beshishini bengenayo iphambili kuthungelwano lwentengiso njengoko kusenzeka kubasebenzisi abakhulu, kubalulekile ukuqinisekisa ukusebenza ngokukuko kwenkampani nge-intanethi, yiyo loo nto uColt ezibeka njengenkampani ebekiwe icandelo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » UJoan Monrabá (Colt) uthetha malunga nokunxibelelana kweshishini kwikamva kwiMedia Media